रातभर खनिन्छ,बिहानै पुरिन्छ उपत्यकाका सडक ! - Arthatantra.com
रातभर खनिन्छ,बिहानै पुरिन्छ उपत्यकाका सडक !
काठमाडौ । उपत्यकामा सडक खनेर खानेपानी पाइप बिच्छ्याउने काम धमाधम भैरहेको छ। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्र्याउने अन्तिम तयारीमा पाइप विस्तार र ट्यांकीहरु निर्माणको काम चलिरहेको छ । बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सडक खन्ने, पाइप बिच्छ्याउने र खनेको सडक पुरेर छाड्ने गरिन्छ। त्यही सडकमा दिनभर सवारी गुड्छन्, यात्रुहरु कुँद्छन्। फेरी राति उहि समय तालिकामा काम चल्छ।
पाइप बिछ्याउन खनिएका मूल सडकमा डोजर र लोडर लगाएर अस्थायी मर्मतको काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । खनेको ठाउँमा पाइप बिच्छ्याएर पुरेर मात्रै छाड्ने गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि आयोजनाले सडक सम्याउने, खाल्डाहरु पुर्ने, धुलो र हिलो हुन नदिने र लोडर लगाएर सडक कसिलो बनाउने गरेको छ।
आलोचना बढेपछि हिजोआज सरकारका सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको ध्यान पनि खिचिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय हिजोआज सडक खन्ने कामको निरीक्षणमा खटिएका देखिन्छन्।
‘रातिमा सडक खन्ने र पाइप बिच्छ्याउने कामको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेका छौं,’ उपाध्यायले भने ‘दिउसोमा पानी स्टोर गर्ने टंकी निर्माणको काम पनि हेरिरहेका छौं।’ धुलो, हिलो कम गर्न र अव्यवस्थित सडकलाई सुधार्नका लागि आयोजनालाई निर्देशन दिइएको र कामको प्रत्यक्ष निगरानी र स्थलगत अध्ययन गरिरहेको उपाध्यायले बताए।
नागरिकन्यूज अनलाईनबाट साभार
५२ औं पुग्यो ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखारहित बैकिङ्ग सेवा काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिका १० ठाटामा आफ्नो ५१ औ र […]
यो १२०% हकप्रद भर्नुभयो ? आजै भरिहाल्नोस् ! काठमाडौं । नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको १२० प्रतिशत हकप्रद भर्ने बुधबार अन्तिम दिन […]